Disitrikan’Ambilobe Kisoa an-jatony matin’ny “Peste Porcine”
Kisoa an-jatony no maty tao anatin’ny herinandro tao amin’ny distrikan’Ambilobe.
Valan-kisoa iray no nitarika ny fiparitahan’ny aretina. Niampita tamin’ireo kisoa mpirenireny izany ary tsy voafehy raha tsy ny faran’ny herinandro teo. Nidina ifotony ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny minisiteran’ny fambolena sy fiompiana ary nanambara omaly tetsy Ampandrianomby fa tsy ahiana intsony ny fiparitahan’ny valanaretina pesta porcine afrikanina amin’ny faritra hafa. Nilaza ihany koa ny tompon’andraikitra fa tsy misy fiantraikany amin’ny fahasalaman’olombelona io pesta mahazo ny kisoa io. Na izany aza dia tsy azo atao ny mivarotra henan-kisoa matin’ny pesta sy mamoaka kisoa velona ao Ambilobe mihazo faritra hafa amin’izao fotoana.